बुटवल । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का महासचिव लोकराज भुसालकी आमा टुमकला भुसालको श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भएको छ । राजमो रूपन्देही समेतको आयोजनामा सैनामैनामा २०७५ चैत्र १९ गते सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
लोकराज भुसालको अध्यक्षता तथा गङ्गालाल सापकोटाको सञ्चालनमा अगाडि बढेको सो कार्यक्रममा राजमो महासचिव जनकराज शर्मा, वामपन्थी नेता कृष्णराज पौडेल, अन्टुकका अध्यक्ष नारायण सापकोटा, अखिल नेपाल किसान महास्घका उपाध्यक्ष चन्द्र बहादुर केसी, नेकपा क्रान्तिकारी–माओवादीका नेता प्रेम सुवेदी लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । सो अवसरमा राजमो रूपन्देहीका अध्यक्ष बद्रे आलम, कपिलवस्तुका अध्यक्ष दधिराम आचार्य, नेकपा (मसाल) कपिलवस्तुका प्रवक्ता छविलाल गैरे, किसान महासङ्घका अर्का उपाध्यक्ष शिव पौडेल, अखिल नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष ढुण्डिराज पौडेल, अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार दुर्गानाथ खरेल लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा परिवारकोतर्फबाट सैनामैना माविका लागि चुरामणि–टुमकला भुसाल स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोषका लागि एक लाख ५१ हजार विद्यालयका अध्यक्ष शिव बस्याललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा अर्घाखाँची मालारानी–५ बागीस्थित सिद्ध माविका लागि पनि सोही बराबरको अक्षयकोषको घोषणा गरी प्र.अ. दिनेश केसीलाई चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
कट्टरपन्थी दललाई मत नदिन भारतीय लेखकहरूको अपील
नयाँदिल्ली । भारतका २००भन्दा बढी विभिन्न भाषाका लेखकले आगामी लोकसभा चुनावमा घृणाको राजनीति फैलाउनेका विरुद्ध मतदान गर्न अपिल गरेका छन् । उनीहरूले भाजपालगायतका कट्टरपन्थी र घृणाको राजनीति फैलाउने दललाई मत नदिन आग्रह गरेका हुन् ।
अपिल गर्ने लेखकहरूमा अरून्धती रोय, गिरिश कर्नाड, अमिताव घोष, बाम, नयनतारा सहगल, टीएम कृष्णा, विवेक शानभाग, जीत थायिल, के सच्चिदानन्दन, रोमिला थापरलगायत छन् । लेखकहरूले अंङ्ग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, बङ्गला, मलयालम, तमिल, कन्नडड रतेलुगू भाषामा यस्तो अपिल गरेका हुन् । स्क्रल डट इनका अनुसार भारतीय लेखकको सङ्गठन ‘इन्डियन राइटर्स फोरम’ मार्फत उनीहरूले समानता र विविधतापूर्ण भारतका लागि मतदान गर्न अपिल गरेका हुन् ।
अपिलमा सीधै हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगायत कट्टरपन्थी कुनै दलको नाम उल्लेख नभए पनि घुमाउरो पारामा भनिएको छ, ‘देश आसन्न लोकसभा चुनावको चौबाटोमा उभिएको छ । हाम्रो संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार, आफ्नो तरिकाले खाना खाने, प्रार्थना गर्ने, जिन्दगी जिउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र असहमति जनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । तर बितेका केही वर्षमा नागरिकलाई उनीहरूको जाति, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रका आधारमा भेदभाव, मारपिट र हत्यासमेत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।’ बितेका केही वर्ष भनेर लेखकहरूले भाजपा नेतृत्वको कार्यकाललाई इड्डित गरेका छन् ।
उनीहरूले भारतलाई विभाजित गर्नका लागि घृणाको राजनीति उपयोग गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले लेखक, कलाकार, फिल्मकर्मी, सङ्गीतकार र अन्य सांस्कृतिक कलाकारलाई धम्क्याउने, हमला गर्ने र प्रतिबन्धित गर्ने काम भएकोमा खेद व्यक्त गरेका छन् ।
महिला, दलित, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यकमाथिको हिंसाविरुद्ध लड्नका लागि दर्बिलो कदम उठाउनुपर्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । लेखकहरूले घृणाको विरुद्ध मतदान गर्नु नै त्यो दर्बिलो कदम हुने बताएका छन् । नागरिकलाई विभाजित गर्ने कूटिल चाल, असमानता, हिंसा, उत्पीडन र सेन्सरशिपविरुद्ध मतदान गर्न गरिएको अपिलमा उल्लेख छ । ‘भारतको पक्षमा र संविधानप्रदत्त अधिकार रक्षाका लागि यो नै उचित कदम हुनेछ ।’
औषधि र लत्ताकपडा बोकेर बारा पुगे डा. गोविन्द केसी
काठमाडौँ । वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी हावाहुरीबाट सबैभन्द बढी प्रभावित बारा जिल्लाको फेटा गाउँ पुगेका छन्। औषधिसहित पीडितका लागि लत्ताकपडा र खाद्यान्न बोकेर डा. केसी बस चढेर बारा गएका हुन् ।
हावाहुरीबाट घाइतेहरूको उपचार गर्न डा. केसी फेटास्थित पुरनियाँ गाउँ पुगेका छन्। उनले त्यहाँ स्वास्थ्य शिविर चलाएका छन्। केसीले सो क्षेत्रमा २९७५ चैत्र १९ गते दिनभरि शिविर चलाए । उनले हाडजोर्नीसम्बन्धी औषधि बढी बोकेका छन्। यस्तै,सिटामोल,पारासिटामोललगायत विभिन्न प्रकारका औषधी वितरण गरेका छन्। उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताले साथ दिएका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा उनी हावाहुरी पीडितको उपचार गर्न गाउँमै पुगेका हुन्। आइतबार साँझ राति हावाहुरी आउँदा बारा र पर्सा जिल्लामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा तीन सय बढी घाइते छन्। घाइतेहरूको बारा र पर्साका विभिन्न अस्पतालहरूमा तथा काठमाडौँस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
राजमो नवलपुरको जिल्ला भेला सम्पन्न
नवलपुर । राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सङ्गठन समिति नवलपुरको जिल्ला भेला २०७५ चैत्र १६ गते नवलपुर जिल्लाको देवचुली नगरपालिका रजहरमा सम्पन्न भएको छ । भेलाले आगामी २०७६ वैशाख २८ गते चौथो जिल्ला सम्मेलन गर्ने निर्णयगरेको छ । भेलाले जिल्लामा रहेका विभिन्नन गरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा सम्मेलन गर्ने, सङ्गठन निर्माण र सदस्यतावितरण अभियान सञ्चालनगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जिल्ला भेलाले २३ सदस्यीय सम्मेलन व्यवस्थापन मूलसमिति निर्माण गरेको छ । साथै २०१ सदस्यीय सम्मेलन तयारी समिति, प्रचार–प्रसार समिति, ७ सदस्यीय आर्थिक समिति, ५ सदस्यीय सांस्कृतिक समिति समेत गठन गरेको छ ।
दिपक पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाको उद्घाटन बयोबृद्ध नेताडिलाराम कडेल, स्वागत विकाराम चौधरी तथा सञ्चालन मन बहादुर रानाभाटले गर्नुभएको थियो । भेलामा वामपन्थी नेता विमलशर्मा, राजमो राष्ट्रिय परिषद् सदस्य चन्द्र सापकोटा, राजमो जिल्ला सल्लाहाकार रामप्रसाद सापकोटा,अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन केनद्रीय उपाध्यक्ष सालिकराम सापकोटा, तराई मधेश जनवादी मोर्चा केन्द्रीय सदस्य रूप नारायण महतो, अखिल नेपाल युवक सङ्घ जिल्ला अध्यक्ष लाल सिंह मल्ल, अखिल नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला अध्यक्ष विष्णु पाण्डे, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन जिल्ला अध्यक्ष कला राई, रक्तिम जिल्ला अध्यक्ष भक्तबहादुर उचई, समता समाज गण्डकी प्रदेश संयोजक रन बहादुर रिजाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा गैंडाकोट न.पा. १६का वडा अध्यक्ष गणेश ज्ञवाली, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्रविद्यार्थी यूनियन (छैठौँ) जिल्ला अध्यक्ष कमला क्षेत्री,किसान सङ्घका पूर्व महासचिव भागिरथ भट्टराईले भेला सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो ।– गोविन्दकुमार शर्मा
कञ्चनपुर रक्तिमको अध्यक्षमा चन्द
महेन्द्रनगर । रक्तिम सांस्कृतिक अभियान कञ्चनपुरको आठौँ जिल्ला भेला अभियानका संयोजक नारायण योगीको प्रमुखआतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ । २०७५ चैत्र १८ गते सम्पन्न भेलाले ललित चन्दलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । जसको सचिवमा क्रान्ति चौधरी र कोषाध्यक्षमा माया चौधरी रहनुभएको छ । सदस्यहरूमा जमुना परियार,हेमन्ति परियार,सिता चौधरी,तुलसी पन्त, सिमा नेपाली, टेक बहादुर घर्ती रहनुभएको छ भने हाललाई २ स्थान रिक्त राखिएको छ । त्यस्तै, सल्लाहाकारमा मञ्जु परियार र धर्मदेव पन्त रहनुभएको छ र १ स्थान रिक्त राखिएको छ । प्रमुख अतिथी संयोजक यौगीद्वारा उद्घट भएको कार्यक्रममा अतिथीहरू राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिव राम बहादुर कार्की र अखिल (छैठौँ)का महासचिव महेशराज जोशीले सफलताको शुभकामना दिनु भएको थियो । ललित चन्दको अध्यक्षता, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी जिल्ला उपाध्यक्ष तथा रक्तिमकी सल्लाहाकार मञ्जु परियारको सञ्चालन तथा राजमो नेता लाल बहादुर कुँवरले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो ।
दाङ,देउखुरी । राष्ट्रिय जनमोर्चा लमही नगर समिती सदस्य तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्टुका जिल्ला सदस्य पिताम्बर आचार्यको श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भएको छ । पार्टीका नगर अध्यक्ष हरि थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य नेकपा का प्रतिनिधि नारायण भुसाल मृतकका काका लगायतले शोक मन्तब्य राख्नु भएको थियोे । कार्यक्रमको सञ्चालन नगर सचीव लेखराज आचार्यले गर्नु भएको थियोे ।
राजमोको गुल्मीदरबारमा वडा भेला सम्पन्न
गुल्मी । राष्ट्रिय जनमोर्चा गुल्मीदरबार गाउँपालिका, बलिथुम, थाक्सीपोखरामा गुल्मीदरबार गाउँपालिका १, बलिथुमा वडा भेला सम्पन्न भएको छ । बलिथुम वडा समितीका अध्यक्ष नरबहादुर माच्कोटी मगरको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको भेलालाई प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चा गुल्मीका जिल्ला सचिव छबिलाल सर्तुङ्गी मगर, अखिल नेपाल महिला सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एंव गुल्मी जिल्ला सदस्य नरमाया राना मगर, गुल्मी जिल्ला सदस्य हरि न्यौपानेले सम्बोधन गर्नूभएको थियो ।
नवनिर्वािचत बलिथुम वडा समितीका उपाध्यक्ष जयबहादुर सलामी मगरको स्वागत मन्तब्य र अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका केन्द्रीय परिषद सदस्य एवं कविरकलाकार जीवित खड्का मगरले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । उक्त भेलाले गुल्मीदरबार गाउँपालिका १, बलिथुम, वडा समिती पुनर्गठन गर्नुकासाथै, अखिल नेपाल महिला सङ्घ, वडा समिती समेत गठन गरेको छ । जसको अध्यक्षमा नरबहादुर माच्कोटी मगर, उपाध्यक्ष जयबहादुर सलामी मगर, सचिव हरि सर्तुङ्गी मगर र कोषाध्यक्षमा बालबहादुर घर्ती मगर चयन हुनुभएको छ । सदस्यहरूमा जगबहादुर सार्की, विष्णु माझी, नरबहादुर सर्तुगी मगर,खगराज सर्तुगी मगर,यमबहादुर फुङजेली मगर, हरिबहादुर खड्का मगर र सोबबहादुर फुङजेली मगर रहनु भएको छ । त्यस्तै, वैकल्पिक सदस्यहरूमा पदम रेश्मी मगर, विरु बलाल मगर, हरिबहादुर सर्तुगी मगर रहनुभएको छ भने सल्लाहकारहरूमा जीवित खड्का मगर, नरबहादुर फुङजेली मगर र दिलकुमारी रेश्मी मगर रहनुभएको छ ।
त्यस्तै, अखिल नेपाल महिला सङ्घ बलिथुम वडा समिती गठन भएको छ । समितीको अध्यक्षमा पार्वती घर्ती मगर, सचिव हिमा खड्का मगर र कोषाध्यक्षमा दिलकुमारी रेश्मी मगर रहनुभएको छ । सदस्यहरूमा विष्णुमाया माझी, मालती सर्तुगी मगर, सिमा बलाल मगर, चेमकली फुङजेली मगर, मनकुमारी माच्कोटी मगर,यमकली खड्का मगर, कृष्णा सर्तुगी मगर, दिलकुमारी फुङजेली मगर, अमृता फुङजेली मगर, बसन्ती फुङजेली मगर, चेमकला रेश्मी मगर र तारा पल्ली मगर रहनुभएको छ ।
समिती गठन लगतै विगतमा नेकपा, बलिथुमका सक्रिय सल्लाहकार थम्मनबहादुर खड्का मगर र काङ्ग्रेस पार्टीको सक्रिय सदस्य रहनुभएका नरबहादुर फुङजेली मगर लगायत सदस्यहरूले पार्टी सदस्यता ग्रहण एंव सदस्यता नविकरण गर्नुभएको थियो ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घको प्रथम जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न
पाल्पा । अखिल नेपाल महिला सङ्घको पाल्पामा २०७५ चैत्र १६ गते प्रथम जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले उमा सिंजाली को नेतृत्वमा ९ पुर्ण २ बैकल्पिक र ३ सल्लाहाकार सहित नयाँ कार्यसमिती निर्वाचित गरेको छ। गठित समितीको उपाध्यक्षमा शान्ता पौडेल, सचिव नरमती सिंजाली र कोषाध्क्षमा शान्ती श्रीनेत रहनु भएको छ । पुर्ण सदस्यहरूमा थानी कुमारी रेश्मी, तुलसा पन्त, भगवती कुवर , कुन्तादेबी गैरे र बैकल्पिक सदस्यहरूमा शुवास घर्ती, खेम कुमारी दर्लामी रहनुभएको छ । सल्लाहकार लक्ष्मी दर्लामी, डिल कुमारी पौडेल र सुमित्रा कुवर रहनुभएको छ ।
अर्घाखाँचीमा संयुक्त भेला सम्पन्न
अर्घाखाँची । रष्ट्रिय जनमोर्चा भुमिकास्थान–१ ढाकावाङले सिटेनीमा आयोजना गरेको सबै जनवर्गिय सङ्गठनहरूको संयुक्त भेला २०७५ चैत्र १७ गते सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चासँग सम्बन्धित सबै मोर्चाबाट सयौँको सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य झविलाल थापा,यमलाल पोख्रेल,जिल्ला अध्यक्ष थम्मन के.सी.,राष्ट्रिय परिषद सदस्य खड्ग बहादुर थापा,भुमिकास्थान नगर अध्यक्ष टेक बहादुर थापा,नगर उपाध्यक्ष कविराम खनाल,अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ सङ्घका केन्द्रीय महासचिव चक्रपाणी पौडेल,युवक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष कुलराज खनाल,अखिल छैठौँका केन्द्रीय सचिव गोपाल प्रसाद भट्टराई,अखिल नेपाल महिmा सङ्घकी जिल्ला सदस्य लिला भुसाल र जनप्रतिनिधिकोतर्फबाट वडा अध्यक्ष भोजराज खनालले मन्तव्य दिनु भएको थियो । उहाँहरूले विप्लवको पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउनु,सिके राउतसँग कुनै प्रक्रिया विनै सम्झौता गर्नु,राष्ट्रहित विपरित नागरिकता विद्येयक पास गर्न खोज्नु,निर्मला पन्तलाई न्याय दिन नसक्नु,मुलुकमा बढेको कर तथा महगींलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु,वाइडबडि देखी अख्तियार जस्तो संस्थामा समेत भ्रष्टचार मौलाउनुले वर्तमान सरकारको छविमा दाग लागेको आरोप लगाउनु भएको छ । मेघराज खनालको अध्यक्षता,रेम बहादुर राउतको स्वागत मन्तव्य र माधव खनालको सञ्चालनमा सम्पन्न भेलाले नुनकान्त भुसालको अध्यक्षतामा १७ सदस्यिय अखिल नेपाल किसान महासङ्घ गठन गरेको छ । उपाध्यक्षमा ज्ञान प्रसाद भुसाल,सचिव नवराज खनाल र कोषध्यक्षमा वासुदेव खनाल चयन हुनुभएको छ ।
त्यस्तै, युवराज खनालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यिय अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको गठन समेत गरेको छ । सङ्घको उपाध्यक्षमा कृष्ण खनाल,सचिव राम प्रसाद खनाल र कोषाध्यषमा कृष्ण रोका चयन हुनुभएको राष्ट्रिय जनमोर्चा ढाकावाङले जनाएको छ ।
यसैविच राष्ट्रिय जनमोर्चा छत्रदेव गाउँपालिकाको भेला पनि नयां नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम नेत्र गैरेको अध्यक्षता,खिमानन्द पाण्डेको स्वागत मन्तव्य र गोकर्ण मुखियाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो । राजमो जिल्ला उपाध्यक्ष गोपाल पौडेल र नेता पशुपति ढकालको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाले नेत्र गैरेको अध्यक्षतामा ९ सदिस्यय गाउँसमितिको गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा खिमानन्द पाण्डे,सचिव गोकर्ण मुखिया,सह–सचिव लेखनाथ बराली र कोषाध्यक्षमा कमला आचार्य चयन हुनुभएको छ । सदस्यहरूमा रिता पाण्डे,कृष्ण प्रसाद भुसाल र पूर्ण प्रसाद श्रेष्ठ रहनुभएकोे राजमो जिल्ला उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । – गोपाल प्रसाद भट्टराई
राजमो रेसुङ्गाको अध्यक्षमा न्यौपाने
गुल्मी । राष्ट्रिय जनमोर्चाको रेसुङगा नगरपालिकाको नगर समितीको अध्यक्षमा हरि न्यौपाने चयन हुनुभएको छ । जसको उपाध्यक्षय यम बहादुर बस्नेत, सचीव शङ्कर प्रसाद पोख्रल र कोषाध्यक्षमा नर बहादुर केसि रहनु भएको छ । त्यस्तै , सदस्यहरमा कमल प्रसाद अर्याल, लाल बहादुर काउछा, हिम प्रसाद घिमिरे, थम्मन बहादुर कुंवर, जितेन्द्र भुसाल, लोकनाथ अर्याल, देवकला कुंवर, खिमा झाङ्क्री र टीका पुन रहनुभएको छ ।
२०७५ चैत्र १६ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा गुल्मीका अध्यक्ष जीवन रानाको उपस्थितिमा राजमो रेसुङगा नगरपालिका स्तरिय भेलाले सो समिती गठन गरेको हो । भेलापछि बसेको बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत गरेको थियो ।
पोखरा लेकसाइडमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको समिति गठन
पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चा पोखरा महानगर पालिका वार्ड न. ६ (लेकसाइड)मा २०७५ चैत्र १६ गते लक्ष्मी कुवरको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय वडा समिती गठन भएको छ । जसको उपाध्यक्षमा लक्षमण ढुड्डाना,सचिव सुक बहादुर गुरुङ (सुमन ) ,सहसचिव पदम कुमार न्यौपान र कोषअध्यक्षमा सरिता श्रेष्ठ रहनुभएको छ । सदस्यहरूमा प्रसाद नेपाली ,रोहित गुरुङ ,कृष्ण कुमार श्रेष्ठ ,बिनोद के.सी सन्तोष बस्नेत सहित हाललाई दुई स्थान रिक्त राखेको छ । त्यस्तै, सल्लाहकारमा साबित्रा केसी, सीता न्यौपाने ,प्रेम के .सी र माया अधिकारी रहनुभएको छ ।
उक्त भेलालाई नेकपा (मसाल)का कास्की जिल्ला प्रबक्ता चन्द्रबहादुर के.सीले उद्घाटन गर्नु भएको थियो भने जातीय समता समाजका जिल्ला सचिब होम सुनार र अखिल (छैठौ) केन्द्रीय उपाध्यक्ष गणेश अधिकारीले भेला सफलताको शुभकामना दिनु भएको थियो । लक्ष्मण ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा भएको भेलाको सञ्चालन लक्ष्मी कुँवर र स्वागत प्रेम के.सीले गर्नुभएको थियो ।
महिला सङ्घको मालारानी गाउँ समितिको अध्यक्षमा कुँवर
अर्घाखाँची । अखिल नेपाल महिला सङ्घ मालारानी गाउँसमितिको अध्यक्षमा तुलसा कुंवर निर्वाचित हुनुभएको छ । मालारानीको वाङ्गीमा २०७५ चैत्र १७ गते सम्पन्न प्रथम भेलाले अध्यक्ष कुंवरको नेतृत्वमा १३ सदस्यिय महिला सङ्घ मालारानी गाउँ समिती गठन गरेको हो । जसको उपाध्यक्षमा खगी थापा,सचिव कमला पन्थी र कोषाध्यक्षमा सरिता थापा सर्वसहमत चयन हुनुभएको छ । सदस्यहरूमा बिमला विष्ट,लक्ष्मी खनाल,सिता भुसाल,सिता पाण्डे र सावित्रा खनाल रहनुभएको छ । कृष्ण कुमारी थापाको अध्यक्षता,गिता भुसालको स्वागत मन्तव्य र कमला पन्थीको सञ्चालनमा भेला सम्पन्न भएको थियो । गाउँपालिकाका सबै वडाबाट महिला प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको भेलाले गिता आचार्य,कृष्ण कुमारी थापा र अनिता घिमिरे रहेको तिन सदस्यिय सल्लाहकार समितिको पनि गठन गरेको छ ।
कार्यक्रममा महिला सङ्घकी जिल्ला उपाध्यक्ष गिता पाण्डेले मन्तव्य दिदै समाजमा अझैपनि पुरातनवादी सोञ्च हावी भएका कारण महिला हिंसाका घटना नरोकिएको दाबी गर्नुभएको छ । कोषाध्यक्ष मिना वि.सी.,राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू नरेन्द्र बहादुर थापा र बिर बहादुर कुंवरले मुलुकमा अपराध गर्नेहरूलाई राज्यबाटै संरक्षण हुँदै आएको आरोप लगाउँदै समाजिक बिकृतिका बिरुद्ध सबै एक जुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
बाँकेमा रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको आयोजक समिति
बाँके । रक्तिम सांस्कृतिक अभियान बाँकेले जिल्ला सम्मेलन तयारीको लागि शरद लामिछानेको संयोजकत्वमा भेला अयोजक समिती गठन भएको ।
२०७५ चैत्र १६ गते सम्पन्न भेलाले सो समिती गठन गरेको हो । जसको सदस्यहरूमा पार्वती रम्तेल, ईश्वर पाण्डेय, गोरखनाथ योगि, चतुर्भुज बुढाथोकी, जुलियस लामिछाने, कृष्ण रसाइली, मुना राना, ज्ञानु खत्री चयन हुनुभएको छ । सल्लाहकारमा मानबहादुर भण्डारी, उत्सव काफ्ले, केशवराज शाही, सन्देश अधिकारी र इन्द्रबहादुर बिसी रहनु भएको छ । रक्तिम सांस्कृतिक अभियान बाँकेको जिल्ला भेलाले जिल्लाभर सांस्कृतिक अभियानको सङ्गठन निर्माण गर्ने र अर्को बृहत जिल्ला भेलाको आयोजना गरि जिल्लामा विभिन्न सङ्गठनात्म कार्यक्रम गरीरेहेको छ ।
शान्तिवार्ताप्रति अमेरिका–कोरिया प्रतिबद्ध
सोल । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय इनले केही समययतादेखि जारी रहेको शान्तिवार्ताप्रति अमेरिका र उत्तर कोरिया दुवै प्रतिबद्ध रहेका बताएका छन् ।
उनले २०७५ चैत्र १८ गते राजधानी सोलमा आफ्ना केही निकटस्थ व्यक्तिहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने– शान्तिवार्ता तथा उत्तर कोरियामा निशस्त्रीकरण गर्ने भन्ने विषयप्रति अमेरिका र उत्तर कोरियाले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएका छन् । उनले यस विषयमा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया र अमेरिकाको प्रतिबद्धता एकसाथ रहेको र यी देश अब शान्ति प्रक्रिया र निशस्त्रीकरणबाहेकको अर्काे कुनै एजेण्डामापछि फर्किन नसक्ने पनि बताए ।
अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको दोस्रो चरणको वार्ताका क्रममा केही सामान्य कठिनाइका कारण कुनै सम्झौता हुन नसकेको भए पनि आगामी दिनमा वार्ताले निरन्तरता पाउने छ र यी विषयमा हामीहरू एकसाथ अघि बढ्ने छौँ । तर सो दोस्रो चरणको अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेताबीचको बैठकमा पनि शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र कोरियाली प्रायद्वीपमा विगतमा जस्तो अशान्तको अवस्था हुन नदिने बारेमा भने सहमति भएको उनले बताए ।
यी दुई देशबीच भियतनामको हनोइमा फेब्रअरी २७ र २८ तारिखमा भेटवार्ता भएको थियो । त्यस उच्चस्तरीय वार्तामा कुनै नयाँ कुरामा सहमति या सम्झौता नभएको भए पनि शान्तिवार्तालाई निरन्तरता दिने बारेमा दुवै देश सहमत भएका बताइएको छ । –एजेन्सी
बस आगलागीमा २० यात्रुको मृत्यु
लामो बाटोमा चल्ने यो बस लिमाबाट चिक्लायोतर्फ गइरहेको थियो । उक्त बसमा खचाखच यात्रु रहेका थिए । गुडिरहेको बसमा अकस्मात आगो लागेको थियो । उक्त आगलागीको कारण हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । आगलागीको कारण अनुसन्धानरत रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
पेरुमा यस वर्षको शुरुबाट हालसम्म भएको यो दोस्रो ठूलो दुर्घटना हो । यसअघि पनि गत जनवरी २५ मा मध्य पेरुमा रहेको एक नदीमा बस खस्दा कम्तीका १० यात्रुको मृत्यु हुनुको साथै अन्य ३० घाइते भएका थिए । पेरुमा सवारीका साधनहरू दुर्घटनामा पर्ने घटनाहरू बारम्बार भइरहन्छन् ।–एजेन्सी
आतङ्कवादी आक्रमण भएको दावी
सिओल । स्पेनको राजधानी म्याड्रिडस्थित आफ्नो दूतावासमा गत महिना भएको घटनालाई उत्तर कोरियाले ‘गम्भीर आतङवादी आक्रमण’ भएको जनाएको छ । करिब एक महिना पहिले भएको घटनाबारे पहिलो पटक टिप्पणी गर्दै प्योङ्याङले आक्रमणबारे अनुसन्धानको माग गरेको छ ।
कोरियन सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी (केसीएनए) ले उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई उद्धृत गरी ‘कुटनीतिक नियोगमा अवैध प्रबेश र कब्जा राज्यको सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको भन्दै यस्तो घटना असहय भएको जनाएको छ ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच हनोइमा भएको सम्मेलनभन्दा पाँच दिन पहिले गरिएको उक्त आक्रमणमा एक समूहले राजदूताबासमा प्रबेश गरी तोडफोड गरी दूताबासकै गाडीहरू प्रयोग गरी पछाडीको गेटबाट भागेका थिए ।
उत्तर कोरियाले घटनामा संलग्न मुख्य सन्दिग्धहरूको नाममा कम्तीमा दुईवटा अन्तर्रािष्ट्रय पक्राउ पुर्जी जारी भएका छन् । स्पेनका अधिकारीहरूका अनुसार एड्रिअन हङ चाङ नामक समूहका एक व्यक्ति व्यापार मामिला हेर्ने उत्तर कोरियाली सहचारीलाई भेट्ने बहानामा दूतावास प्रवेश गरेका थिए ।–एजेन्सी
अफगानिस्तानमा आधा जनता गरिब
काबुल । अफगानिस्तानको जम्मा तीन करोड जनसङ्ख्यामध्ये झण्डै आधा जनतामा बहुरूपी गरिबीको समस्यामा बाँच्न बाध्य भएका सार्वजनिक गरिएको एक सरकारी तथ्याङ्मा उल्लेख छ ।
दशकौदेखि विभिन्न सशस्त्र समूहको सामना गर्दै आएको एशियाली मुलुकमा बेरोजगार दर पनि उच्च रहेको जनाइएको छ । इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानले पहिलो बहुरूपी गरिबी सूचक (ए–एमपिआई) का अनुसार अफगानिस्तानको जनसङ्ख्याको ५१.७ प्रतिशत जनता बहुरूपीय अवस्थामा गरिब रेहेका पाइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन शैली, रोजगारीबाट बञ्चित रहेका र यहाँको राष्ट्रिय उत्पादन, आम्दानी र सुरक्षाले नकारात्मकताको सामना गरिरहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गरिबीको तह सबैभन्दा कम राजधानी काबुलमा १२ प्रतिशत रहेको र विद्रोहीको प्रभाव रहेको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बाघिस प्रान्तमा ८१ प्रतिशत रहेको छ ।
विज्ञप्ति अनुसार, अफगानिस्तानका बहुरूपी गरिबीको रेखामा रहेका नागरिकमध्ये ५८ प्रतिशत जनता १८ बर्षमूनिका बालबालिका रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार हरेक १० बहुरूपी गरिबमध्ये झण्डै ६ जनामा गरिबीको चरम प्रभाव रहेको बताइएको छ । यहाँको ग्रामिण क्षेत्रमा बहुरूपी गरिबीको अवस्था शहरी क्षेत्रकोे तुलनामा तीन गुणा बढी रहेको र घुमन्ते (कुची) जनसङ्ख्यामा चरम गरिबीको अवस्था सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । उनीहरू प्राय घुमेर बस्ने हुँदा उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र बासलगाण्तका अन्य आधारभूत सुबिधासम्म पनि पाउनलाई कठिन हुने गरेको छ । अफगानिस्तानको बालबालिकामा गरिबीको अवस्था निर्धारण गर्ने एक महत्वपूर्ण कारकलाई उनीहरूको शिक्षाको अवस्था रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो बर्षहरूमा अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र र सुरक्षाको अवस्थामा अनपेक्षित समस्या देखिएपछि उक्त सूचना बाहिर ल्याइएको हो ।–एजेन्सी
सीमा बन्द गर्ने ट्रम्पको चेतावनी
पाल्मविच । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका छिर्न खोज्ने आप्रवासीलाई रोक्न थप कदम नचाले मेक्सिकोसँग जोडिएको सीमा बन्द गर्न सक्ने बताएका छन् । सीमा बन्द गरिए आवतजावत अवरुद्ध हुनुका साथै अर्बौ डलरले व्यापार खर्च बढ्नेछ ।
मेक्सिकोको नाका भएर अमेरिका छिर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहँदा ट्रम्पको पछिल्लो चेतावनी आएको हो । मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानवेल लोपेश ओर्बयाडोरले यो विषयलाई लिएर आफू मुठभेडको स्थितिमा नफस्ने बताएका छन् । विदेशमन्त्री मार्सेलो एब्रार्डले मेक्सिको अमेरिकाको ठूलो छिमेकी भएको र चेतावनीका आधारमा कदम नचाल्ने बताए । यस पहिले शुक्रवार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले भने,‘अर्को हप्ता मैले सीमा बन्द गराउँछु जस्तो देखिन्छ र त्यसो गर्दा मलाई कुनै समस्या हुनेछैन।’
रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको जिल्ला तदर्थ समिति गठन
डोटी । रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको डोटी जिल्ला तदर्थ समिती गठन भएको छ । २०७५ चैत्र १३ गते सम्मपन्न भेलाले नविन विकको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यहरूमा यज्ञराज भट्ट, राम नेपाली, सिमा मलासी,मञ्जु नेपाली, सचिन नेपाली,कलेन्द्र बि.क. र महेन्द्र वि.क.रहनुभएको छ भने हाललाई एक स्थान रिक्त राखिएको छ ।
हिक्मत परियारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन जगतराम वि.क.ले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको प्रमुअ अतिथी राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला उपाध्यक्ष मिन बहादुर मलासी, विशिष्ट अतिथी जिल्ला सचिव केशवनाथ योगी र अतिथी अखिल (छैठौ)का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य डवल तिरुवा रहनुभएको थियो ।
त्यस्तै, केआइसिंह गाँउपालिका स्तरिय १४ गते सांस्कृतिक अभियानको समिती गठन भएको छ । समितीको अध्यक्षमा राम नेपाली रहनुभएको छ भने उपाध्यक्ष सिमा मलास,िसचिव रोहित वि.क.र कोषाध्यक्षमा सिता वि.क. रहनुभएको छ ।
सदस्यहरूमा खिमा वि.क.,निरज परियार,भुवन वि.क.,निर्प वि.क.,भावना कठायत, सुरेन्द्र वि.क.,सिर्जना आउजी,सचिव केराली,ईन्द्रा भाट,सहदेव भट्ट रहनुभएको छ भने हाललाई एक स्थान रिक्त राखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रगतिशील लेखक सङ्घको प्रथम सम्मेलन
सुर्खेत । प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको प्रथम कर्णाली प्रदेश सम्मेलन २०७५ चैत्र १६ गते सुर्खेतस्थित जननमूना माविको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ । साहित्यकार डा दिपक गौतमको अध्यक्षता तथा साहित्यकार जगत वशिष्ठको सञ्चालन रहेको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा प्रलेस नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रकाश पुरी, विशेष अतिथिमा डा. जिवेन्द्र देव गिरीका,नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (नेकपा) मा प्रतिनिधिहरू लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका अतिथिहरूको पनि आतिथ्यता रहेको थियो ।
सम्मेलनले साहित्यकार गिरीप्रसाद बुढाको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय प्रगतिशील लेखक सङ्घ कर्णाली प्रदेशको प्रदेश समिति निर्माण गरेको छ । जसमा उपाध्यक्ष युद्ध विक्रम शाही, महिला उपाध्यक्ष सीता यरी, सचिव हरिलाल महतारा, सहसचिव धिरेन “अनुपम“, कोषाध्यक्षमा विष्णु महतारा, सदस्यहरू टिकाप्रसाद पोख्रेल, पूर्णबहादुर शाही, पृथ्वी बहादुर सिंह, पूर्णसमिर महतारा, थानेश्वर लामिछाने, सिद्ध बहादुर खड्का, रङ्गविर विश्वकर्मा, अज बहादुर गिरी, भरत प्रमोद दाहाल, यमराज शर्मा, मायाराम न्यौपाने, हस्तराज रेग्मी, सोनिया खड्का, प्रकाश आचार्य, कमप्रसाद देवकोटा, नवराज न्यौपाने, पार्वती न्यौपाने, मनलाल ओली जगत वशिष्ठ रहेका छन् ।
प्रलेस रूपन्देहीमा पद हस्तान्तरण
बुटवल । प्रगतिशील लेखक सङ्घ रूपन्देहीमा पदस्थापन तथा पदहस्तान्त्रण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गत चैच ९ गते प्रगतिशील लेखक सङ्घ रूपन्देहीको आठौँ जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सोही सम्मेलनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई २०७५ चैत्र १५ गते एक कार्यक्रमबीच पदहस्तान्त्रण गरिएको हो ।
प्रगतिशील लेखक सङ्घ प्रदेश प्रतिनिधि शरिता श्रीषले सफथ ग्रहण गराएकी हुन् । उक्त कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष देवेन्द्रराज घिमिरेले नव निर्वाचित अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङ नेतृत्वको समितिलाई संस्थाको जिम्मेवारीका साथै माइनुट हस्तानत्रण गरेका थिए । त्यस्तै निर्वतमान कोषाध्यक्ष ज्ञानु केसीले नवनिर्वाचित कोषध्यक्ष लक्ष्मी वेलवासेलाई संस्थाको आर्थिक हिसाव हस्तानत्रण गरेकी छन् । सोही कार्यक्रममा बोल्दै निर्वतमान अध्यक्ष घिमिरेले नेपाली समाजमा रहेको रूढिवादी तथा परम्परावादी संस्कृति, पछौटेपन, असमानता, छुवाछुत, विभेदका विरुद्व प्रलेसलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताए । प्रगतिशील लेखक सङ्घको स्थापनाको उद्वेश्यलाई आत्मसाथ गरेर प्रगतिशील आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन सबै सक्रिय भएर लाग्न सबैलाई आग्रह गरे । शरिता श्रीषको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो । प्रलेस रूपन्देही अध्यक्ष दलबहादुर गुरुगंले प्रलेसको अभियानलाई गाउङ्गाउँ पुराउने र प्रलेसका हरेक कार्यक्रमलाई मर्यादित बनाउने प्रतिवद्दता जनाएका छन् ।
प्रलेसका केन्दी्रय पार्षद मिनबहादुर रानाले विसङ्गति र गलत प्रकारको संस्कारका बिरुद्द प्रलेसको अभियानलाई सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।आठौ सम्मेलनबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारी, सदस्यहरू, निर्वतमान अध्यक्ष, रूपन्देहीमा रहेका पार्षद र प्रदेश प्रतिनिधिहरू यही चैत्र २२ र २३ गते काठमाडौँमा हुने प्रगतिशील लेखक सङ्घको सम्मेलनमा प्रतिनिधिको रूपमा पठाउने निर्णय भएको सचिव श्यामलाल पोखरेलले जानकारी गराएका छन् । – श्यामलाल पोखरेल